नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ हाँक्ने तयारीमा उम्मेदवार महिला – Sadarline
विविध कार्यक्रम गरी फाल्गुनन्द जयन्ती मनाईंदै
आफुलाई क्यान्सर भएको सञ्जय दत्तद्वारा पुष्टि
बाँकेसहित देशभर मनाइयो संबिधान दिवस
नेपालगन्ज उद्योग बाणिजय संघको भदौ ११ को निर्वाचनको लागि एक उपाध्यक्ष र ४ जना सदस्य पदमा गरी ५ जना महिला दुई प्यानलबाट निर्वाचन लड्दै छन् । सो निर्वाचनको लागि कपिल अधिकारी नेतृत्वको समावेशी साझा समूहबाट उपाध्यक्षमा रचना श्रेष्ठ, सदस्यहरुमा उषा थापा, मलती शर्मा सुवेदी र मन्दीरा पाण्डे रहेका छन् भने नन्दलाल बैश्य नेतृत्वको समावेशी समूहबाट सदस्यका लागि तारा रोकाया क्षेत्री उम्मेदवार रहेका छन् । उम्मेदवार महिलाहरु यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमै पहिलो पटक समावेशी साझा समूहले उपाध्यक्ष सहित चार जना महिलालाई संघमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । अर्कोतिर समावेशी समुहबाट उम्मेवार बनेकी रोकाय आफैमा पनि शसक्त उम्मेदवार हुन । यसै क्रममा उम्मेदवार रहेका सबै उम्मेदवार महिलाको बिचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
रचना श्रेष्ठ : समावेशी साझा समूहबाट उपाध्यक्ष
यहि भदौ ११ गते हुने उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगन्जको लागि समावेशी साझा समूहवाट उपाध्यक्ष (उद्योग) पदमा रचना श्रेष्ठले उम्मेदवार हुन ।
तपाइले यसअघि पनि उपमहासचिव भएर संघको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ यसपटक उपाध्यक्ष उद्योगमा लड्दै हुनुहुन्छ कस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?
–मलाई यसअघिको निर्वाचनमा सम्पूर्ण व्यापारी तथा मतदाताहरुले महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अत्याधिक मत दिएर विजयी बनाउनुभयो । उहाँहरुले त्यतिबेला लगाएको गुन मैले बिर्सिएकी छैन तर, त्यो कार्यकालमा हाम्रो समूहको बहुमत नहुँदा व्यवसायीक हित तथा प्रवद्र्धनका लागि बनाएका योजना र नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भयो । यद्धपी त्यो कार्यकालबाट धेरै अनुभव मैले संगालेकी छु । व्यापारीका समस्याहरु बुझेकी छु । तसर्थ यसपटक पूर्ण बहुमत ल्याएर विगतमा गर्न नसकेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ म पुनः चुनावी मैदानमा उत्रिउकी छु र, मलाई व्यापारी तथा मतदाताप्रति विश्वास छ कि उहाँहरुले महिलाको शिर झुक्न दिनुहुनेछैन । पहिलेझै समर्थन दिएर विजयी गराउनुहुनेछ ।
उषा थापा : समावेशी साझा समूहबाट सदस्य
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा सदस्य पदको उम्मेद्वार उषा थापा (भण्डारी) उदयीमान व्यबसायी हुन । राँझा स्थित न्यू नारायणी फेन्सी पसलकी प्रोप्राइटर उषा युवा महिला व्यवसायी, समाजसेवामा समेत सक्रिय छन् । उषा आवद्ध नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष र अग्रगामी महिला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा आमा समुहकी अध्यक्ष पनि हुन ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा कुन योजनाको साथ नेतृत्व गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
–मैले विभिन्न संघ संस्थामा काम गरेर अनुभव लिइसकेकी छु,त्यो अनुभवको आधारमा उद्योग वाणिज्य संघमा पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्यो । व्यवसायी महिलाको हक हित,उद्योग व्यवसाय संचालनमा महिलालाई अग्रसर,महिलाको क्षमता विकास गराउन वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक छ।अझ महिलालाई व्यवसायमा सक्रिय गराई उनीहरुको क्षमताविकास लाई प्राथमिकता दिने मेरो चाहना छ । त्यसैले पनि म यसतर्फ प्रेरित भएँ । म मात्रै होईन हाम्रो समावेशी साझा समुहबाट चार जना महिला उम्मेद्वार छौँ । अझ उपाध्यक्ष जस्तो पदमा पनि हाम्रो तर्फवाट महिला नै हुनुहुन्छ । अन्य टिमले महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचका कारण अवसर नदिएको मैले बुझेकी छु । त्यस्तो व्यवहार सरासर महिलालाई व्यवसायीक क्षेत्रमा अघि बढाउन नचाहने हीन भावनाको उदाहरण हो । महिलाले अवसर पाए जस्तोसुकै पदमा रहेर पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । आधा पुरुष आधा महिला भएको हाम्रो देशमा महिलाहरु अझै पछि पार्न खोजिन्छ तर देशमा महिला राष्ट्रपति ,सभामुख, प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका छन् भने अव पछि पर्नुपर्ने अवस्था छैन् । कसैले महिलाको नाममा अवसर दिदैन भने स्वयम महिलाले नै त्यसको सहि माध्यामवाट वदला लिन सक्नुपर्छ ।
मालती शर्मा (सुवेदी) :समावेशी साझा समूहबाट सदस्य
सदस्य पदकी उम्मेदवार मालती शर्मा सुवेदी राजनीतिक परिवारभित्र हुर्किदै आएकी उम्मेदवार हुन । उनी संविधान सभाकी पूर्व उपाध्यक्ष पूर्णाकुमारी सुवेदीकी छोराबुहारी हुन तर, उनको लगाव राजनीति भन्दा पनि उद्योग व्यवासायमा छ । यस्तो पृष्ठभूमि भएकी मालतीलाई हामीले सोधेका थियौँ,
तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति हुँदाहुँदै पनि तपाई व्यवसायीक क्षेत्रबाट नेतृत्व पुग्ने चाहना किन राख्नुभयो ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक भएपनि मैले व्यापार व्यवसायलाई नै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएकी छु । नेपालगन्ज जहाँ अधिकांश महिलाहरुलाई पर्दाभित्र राखिन्छ । उनीहरुलाई खुलेर प्रतिष्पर्धामा आउन नदिने सामाजिक अवस्था छ तसर्थ मैले ती पर्दाभित्रका सक्षम र योग्य महिलालाई आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोंच राखेर वाणिज्य संघको चुनावमा उम्मेदवार बनेकी हुँ । अझै पनि उद्योग वाणिज्य संघमा पुरुषत्व हावी छ तर, वाणिज्य संघमा लैंगिक हिसावले महिला र पुरुष वरावरी हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो । यहि चाहनाले मलाई यो मार्गमा तान्यो । झट्ट हेर्दा मेरा सासु ससुरा राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएकोले मलाई पनि कसैले राजनीतिक क्षेत्रको भन्न सक्छ तर म कहिलै राजनीतिमा लागिनँ । म व्यापारिक क्षेत्रबाटै आफ्नो आर्थिक यात्रा सुरु गरेँ भने र अन्त्यसम्म यहि क्षेत्रलाई आत्मसाथ गर्नेछु ।
मन्दिरा पाण्डे समावेशी साझा समूहबाट सदस्य
मन्दिरा पाण्डे स्टेशनरी व्यवसायी हुन । नेपालगन्जमा पत्रपत्रिका पढ्नेहरु उनलाई धेरै अघिदेखि चिन्छन् । अहिले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म दैनिकी बित्ने गर्दछ । २३ वर्षदेखि निरन्तर यो व्यवसायमा लाग्दै आएकी मन्दिरा आफुमात्रै होईन साना ठूला व्यवसायी महिलाहरुलाई वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पुर्याउने उद्देश्य लिएको बताउछिन ।
सजिलो छ त महिलालाई वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पुर्याउन ?
समाजसेवा, राजनीति र व्यवसाय यी तिनैक्षेत्रमा सुरुदेखिनै खटिदै आएकी छु । साना, मझौला उद्योग व्यवसायमा संलग्न महिलाहरुलाई कसरी माथि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले मलाई वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जगाएको हो । आँटे के असम्भव छ र ? व्यवसायप्रति लगनशिल भएर लाग्ने र उठ्न नसकेका वर्गलाई उठाउने कोशिश गर्ने हो भने अवको केही वर्षमै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ सम्पूर्ण पदमा महिलालाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो ध्येय यहि रहेकोले यसैतर्फ लाग्ने छु । विभिन्न समस्याले पिसिएका थिचिएका व्यापारीलाई सघाउने मेरो चाहना छ । आशा छ सम्पूर्ण व्यापारी तथा मतदाताहरुको साथ पाउने छु ।
हाम्रो समावेशी साझा समुहले महिलालाई राम्रो अवसर दिएको छ । हामीले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुअघि भेलानै गरेर आवाज उठाएका थियौं महिलाको सहभागीता वढाउनु पर्छ भनेर त्यसलाई सम्मान गरेर समावेशी साझा समुहले अवसर दिएको छ । महिलाललाइ उच्च प्राथमिकताका साथ आर्थिक क्षेत्रमा अघि वढ्नुपर्छ । यसले आम मतदाता व्यापारीमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
ताराकुमारी खत्री रोकाया,समावेशी समूहबाट सदस्य
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको वर्तमान कार्यसमिति सदस्य हुन । खत्री ब्यापार ब्यवसायमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रुपमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकी उनले बिभिन्न संघसंस्थाहरुमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरि सकेकी छन् ।
स्नातक तह उत्तिर्ण गरि अध्यापनको अनुभव पनि संगालेकी सफल महिला ब्यवसायीको रुपमा आफुलाई उभ्याउँदै आएकी खत्रीले लायन्स क्लब, उज्यालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अलावा अन्य थुप्रै संघसंस्थामा नेतृत्व सम्हालीसकेकी छन् । खोटाङबाट नेपालगन्ज आएको कम समयमै आफुलाई सामाजिक ब्यक्तिको रुपमा स्थापित गर्न सफल खत्रीलाई आसन्न वाणिज्य संघको निर्वाचनमा बलियो उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
सदरलाइनडटकम ९ भदौ, नेपालगन्ज : नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले आफ्ना पुजनिय पिता गुरुप्रसाद खत्रीको स्मृतिमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेमा ‘गुरुप्रसाद खत्री स्मृति स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कारका लागि एक लाखको अक्षयकोष घोषणा गरेका छन् । पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष रुद्र सुवेदीको अध्यक्षतामा महासंघ बाँकेमै […]
५ मंसिर २०७४, मंगलवार १९:५१